Fikradani waxay muujineysaa iPhone 12 Pro iyo afarta kamaradood | Wararka IPhone
Bil ka hor maahan in Apple ay soo bandhigtay iPhone-kiisa cusub 11 iyo 11 Pro waxaana jira horeyba fikradaha iPhone-ka soo socda. Way cadahay in tufaaxa weyn uusan soo bandhigi doonin taleefanadiisa cusub ilaa Sebtember 2020 laakiin maanta waxaa durba jira warar xan ah oo ku saabsan jiilka soo socda iyo adeegsadayaasha doonaya inay bilaabaan ka shaqeynta nashqadaha laga yaabo inay ka fog yihiin waxa dhabta noqon doona. Si kastaba ha noqotee, maanta waxaan arki karnaa mid ka mid ah fikradaha ugu horreeya ee iPhone 12 Pro oo leh a naqshad la mid ah iPhone SE, iPhone 4 iyo iPhone 5 leh bilicsanaanta jirka oo wax yar ka harta geesaha caadiga ah iyo wuxuu ka dhigayaa darajada inay baaba'do
iPhone 12 Pro: 4 kaamirooyin, majiro xog iyo shaashad dhan
Yasser Farahi wuxuu ahaa abuuraha fikradan aan ku arki karno iPhone 12 Pro iyo iPhone 12 Pro Max. Waa in la xoojiyaa in wax kasta oo aan ku soo bandhigno qodobkaan laga soo qaatay fikradda lafteeda isla markaana aysan ku xirneyn meel ka baxsan ama run sheegto. Fikradda ayaa muujineysa jiil cusub oo iPhone ah halkaasoo nashqaddeedu na xusuusinayso asxaabtii hore ee isaga oo kale ah. iPhone SE ama iPhone 4.
Dhamaadka waxaa lagu heli karaa cawl, cirro bannaan, cagaar saqbadh dhexe iyo SOO SAARKA caadiga ah (RED). Intaa waxaa dheer, marka la eego qaybinta awoodaha, waxay ka bilaabmi lahaayeen 256 GB illaa ay ka gaaraan Qaaxada awoodda. Xagga RAM, nooca caadiga ah ee Pro wuxuu lahaan lahaa 5 GB halka nooca Pro Max uu gaarayo 8 GB. Heer farsamo, shaashadu waxay lahaan laheyd tikniyoolajiyad ProMotion Super Retina XDR oo leh qiime cusbooneysiin ah 120 Hz iyo qaraar dhan 2688 × 1242 iyo 458 pixels halkii inji.
Intaa waxaa dheer, waan aragnaa 4 kamaradaha, mid kale haddii aan barbar dhigno kan hadda jira ee iPhone 11 Pro, oo ah kakooban saddex kamarad qunyar socod ah oo kii afraad 3D ah lagu dari doono si loo horumariyo tiknoolajiyadda ToF ee aan wax badan ka maqalnay. Isbeddel muhiim ah oo la xiriira shaashadda ayaa noqon doona tirtirid rasmi ah ee darajo sidaas darteed ka tagista shaashad la'aan qaan gaar ah oo ka mid ah iPhone X.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Fikradani waxay muujineysaa iPhone 12 Pro iyo afarta kamaradood
Hawlgallada sheegashooyinka Wicitaanka Waajibaadka: Moobaylku wuxuu noqon karaa mid xakamaysada ku habboon